Adam Savage Anovaka 'Ghostbusters' Proton Pack - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Adam Savage Anovaka 'Ghostbusters' Proton Pack
Adam Savage Anovaka 'Ghostbusters' Proton Pack
Tinoda Imwe Yeiyi
by Trey Hilburn III October 10, 2021 334 maonero
Ngano 'Adam Savage inguva yehungwaru uye zvishoma zvemufirimu fan. Saka, zvirokwazvo iye ari Ghostbusters anonyanyisa. Pane yazvino episode yeTested, Savage akaenda ndokuvaka purotoni kurongedza kuita iyo yasara yeiyo Ghostbusters nyika ine godo.
Ehezve, isu tatove tichida kwazvo packe yakavakwa naSavage. Kune akawanda mapuroteni mapakeji kunze uko ekutenga uye iwe unogona kutombozvivakira zvako, asi imwe yakavakwa naSavage inokumbira mubvunzo kuti unonyatsoshanda here?
Ichi chiitiko che Kuedzwa inotsanangurwa se:
Mukufungidzira maGhostbusters: Mushure mekufa, Adam anogadzira reprotiki Proton Pack yakafemerwa neiyo firimu, izere nemuzere wemwenje unofambidzana, mhedzisiro yehutsi, uye mamwe ma greeblies kuti ive yake yega vhezheni yechiratidzo chemufananidzo. Uye zvirinani zvakadaro, Adam anopiwa mukana wekuwana kune rimwe gamba Proton Pack kutora mafirimu kubva kuGhostbusters: Mushure mekufa kwaanoshandisa sechirevo chekutsanangura kwake uye kupedzisa. Heano mabudiro akaita tsika yaAdamu Proton Pack.
As Ghostbusters: Mushure mekurarama nzira, kutarisira uye kushambadzira kunokura. Isu tiri mazana zana muzana zvakanakanaka neizvi sezvo, zvinoreva kuti tiri kuwana mamwe maonerwo, matoyi uye chikafu chisina kudya chakapihwa chiratidzo cheGG!
Iwe unofungei nezve Savage's proton pack kuvaka. Regai tizive pane yedu Facebook uye Twitter peji.